Suxufiga caanka ah ee Mareykanka Larry King ayaa ku geeriyooday da’da 87 jir xarunta… – Hagaag.com
Posted on 23 Janaayo 2021 by Admin in Lifestyle // 0 Comments
Suxufiga caanka ah ee Mareykanka Larry King, oo kamid ahaa wajiyadda warbaahinta ugu caansan Mareykanka, wuxuu ku dhintey da’da 87 jir maanta oo Sabti ah, isagoo ku dhintey Xarunta Cedars Sinai ee magaalada Los Angels.
Lama sheegin sababta keentay geerida King, laakiin CNN ayaa goor sii horreysay soo warisay in isbitaal la dhigay sababo la xiriira cudurka Coronavirus.
Waxaa lagu sifeeyay Larry King inuu yahay sayidka makarafoonka, isagoo bixiyay ilaa 50 kun oo wareysiyo ah noloshiisa, wuxuuna caan ku ahaa xirashada suunka garbaha, waxaa marti u noqday hogaamiyeyaal ka tirsan adduunka, jilayaasha filimada iyo dadka caanka ah ee la tirsan bulshada.
Lawrence Harvey Saiger wuxuu ku dhashay Brooklyn, New York, wuxuuna ka dhashay qoys Yuhuud ah oo reer Ruush ah oo soo galooti ah, ka dib markii aabihiis u dhintay wadno xanuun isagoo sagaal jir ah, hooyadiis waxay ku qasbanaatay inay ku noolaato kabka dhaqaalaha si ay u koriso isaga iyo walaalkiis ka yar, sidoo kale wuxuu ku khasbanaaday inuu shaqeeyo markuu dhamaystay dugsiga sare.
Riyadiisu waxay ahayd inuu ka shaqeeyo warbaahinta, markaa saaxiib ayaa kula taliyay inuu aado Miami, halkaasna wuxuu ka codsaday inuu ka shaqeeyo idaacad yar, sidaa darteed maareeyaha idaacadda ayaa magaciisa u beddelay “Larry King.”
Wuxuu idaacadaas maxaliga ah ka bixiyay wareysiyo dhowr ah oo lagu qabtay maqaayada Bombernick ee kutaala Miami Beach, wuxuuna wareysanayay qofkasta oo maqaayada galaya, wareysigiisi ugu horeeyay wuxuu la qaatay mid kamid ah shaqaalaha maqaayada, mushaarkiisuna kama badneyn 50 doolar asbuucii.
King waxaa lagu sifeeyaa inuu yahay nin weyn oo caan ku ah soo bandhigida telefishanka, maadaama uu ahaa lamaane guuleystey aasaaskii CNN laga soo bilaabo 1985 illaa 2010, wuxuuna ku guuleystey abaalmarino badan oo ay ka mid yihiin laba Abaalmarin oo loo yaqaan ‘Peabody Awards’, ee saxaafada oo ah abaalmarin qaali ah oo sannad kasta ay bixiso kuliyada Grady ee Jaamacadda Georgia oo lagu qiimeeyey Guulahiisa dhinaca warbaahinta.
Sanadkii 1995, wuxuu la kulmay Madaxweynihii geeriyooday ee Falastiin Yasser Arafat, Boqorka Urdun King Hussein, iyo Raiisel Wasaaraha Israel Yitzhak Rabin, wuxuuna qof walba shaashadda ku baray barnaamijkiisa.
Liiskiisa martida waxaa ku jira muuqaallo kala duwan, laga soo bilaabo Dalai Lama ilaa Elizabeth Taylor, Mikhail Gorbachev ilaa Barack Obama, iyo Bill Gates ilaa Lady Gaga, waxaa kaloo ku jira kulan ​​uu la qaatay Paris Hilton, oo ka sheekeysay waqtigii ay ku qaadatay xabsiga 2007, wuxuu kaloo la kulmay asxaabta Michael Jackson Iyo xubnaha qoyskiisa ka tirsan oo ka hadlay dhimashadiisa sanadkii 2009.
King wuxuu had iyo jeer ku faani jiray inuusan si aad ah u soo diyaarin jirin wareysiyada, laakiin qaabkiisa gaarka ah wuxuu martida ka dhigi jirtay kuwo raaxo ku qabo in ay ka hadlaan sirtooda iyo arrimaha ugu muhiimsan ee noloshooda dhageystayaasha hortooda.
Ka dib markii uu u dabaaldegay sannad-guurada 25-aad ee kulankiisii ​​ugu horreeyay, King ayaa wuxuu ku dhawaaqay inuu joojiyey barnaamijkiisa 2010, isagoo u sheegay daawadayaasha “waa waqtigii laalaadin lahaa suunka garbaha caawa” Sannadkii 2011, wuxuu u wareegay kanaalka “Russia Today-America”, wuxuu ka hadlay oo soo bandhigay arrimo badan oo siyaasadeed oo kulul.